Izindaba - Indlu ye-P4mm Rental LED Display Display ePoland
I-5x3.072m Isibonisi Esigcwele Sombala we-P4mm Wangaphakathi
I-512x512mm Die Casting Aluminium IKhabhinethi
Usayizi weKhabhinethi: 512x512mm
Isixazululo seKhabhinethi: Amaphikseli ayi-128x128
Isisindo: cishe i-8kg
Ubuningi beKhabhinethi: ama-60pcs, ama-10pcs ubude nama-6pcs wokuphakama.
Hlola efektri yethu
Umkhiqizo ngamunye uvivinywa ngaphezu kwamahora angama-72 ngaphambi kokuthunyelwa.
Igcwele icala lokulwa, kulula ukuhamba, Ifanele izibonisi eziqashisayo ezidinga ukushintshwa kwesayithi njalo.
Kulezi zinsuku, inzuzo yomkhakha wesikrini se-LED iyahlanjululwa kancane kancane, futhi umncintiswano we-homogenization unolaka. Esakhiweni esisha semakethe, abakhiqizi bakhiqiza imikhiqizo ye-LED ebiza ngemali ephansi, encanyana, esindisa amandla njengezikhala ezincane nezincane, ukuzinza, phezulu nangaphezulu, ukuboniswa kwencazelo ephezulu kakhulu, ukufakwa nokusetshenziswa kokuhlakanipha okuthe xaxa isibe imigomo yokuphishekela ukuboniswa kwebhizinisi le-LED.
I-LED izoguqula ukukhangisa kwangaphandle kwendabuko, amandla entuthuko wedolobha lesigaba sesibili nesesithathu Ukuthuthuka kwamanje kwesikrini se-LED eChina, kepha futhi kuthathe indawo kancane kancane kwezikhangiso ezingokwesiko zangaphandle. Isikhangiso sebhokisi lesibani esikhulu sangaphandle seShenzhen New Airport sithathelwe indawo yisibonisi se-LED. Ukuboniswa kwe-LED kwesiboniso saseRoyal kuhlanganisa izitolo zokugunda izinwele, iziteshi, izikhumulo zezindiza, nezakhiwo edolobheni lokuqala, lesibili nelesithathu. Iphinde iphule nezikhangiso ezingokwesiko zangaphandle ezimile ukuze zikhangise ngokunamandla, isibonisi sevidiyo, isibonisi se-LED sikuphazamise ngokuphelele ukukhangisa kwendabuko kwangaphandle.
Ukukhangisa kwesikrini sangaphandle se-LED kube nezinguquko ezinyakazisa umhlaba esikhathini esifushane. Kusukela kwizimpawu zokuqala zesitolo, ngokuvela kobuchwepheshe obusha, izikrini zokukhangisa ezinamandla eziya ezindongeni ezinkulu zokubonisa ividiyo, ukukhangisa kwangaphandle kucishe kwaphela enyameni yabantu. Lutho neze.
Ngakho-ke amabhizinisi amaningi athathwa njengezindlela ezibalulekile zokukhiqiza uphawu lwenkampani nokwenyusa isithombe. Ngaphansi komfutho wencazelo ephezulu, i-4k nobunye ubuchwepheshe, izikhangiso zangaphandle zivame ukutholakala ezigabeni eziphithizelayo lapho abantu begeleza khona. Ubukhali besibonisi sangaphandle buya ngokuya bukhula, ukuze izinketho zikasayizi ezinkudlwana zinganikezwa, okwenza isibonakaliso se-LED sibonakale ngokuya saziwa emakethe embonini yokukhangisa yangaphandle.
Isibonisi se-LED sangaphandle sinokusebenza okuhle okuningi. Isibonelo, indawo yayo ngokuvamile isendaweni enabantu abaningi ngokuqhathaniswa nezinye izindlela zokukhangisa. Usayizi ofanele nesithombe esihle kungasinikeza umthelela wokubuka onamandla. Esikhathini sanamuhla sokuqhuma kolwazi, le ndlela yokuqaphela eyingqayizivele ivame ukuba lula ukugqama ezikhangisweni ezinkulu. Bona ngempumelelo ukuxhumana nezethameli, ufeze isithombe somkhiqizo nezinhloso zokusabalalisa ulwazi lomphakathi.
Ukukhangisa kwesikrini se-LED kunikeza ifomethi yokubonisa ecebile yokukhangisa ngaphandle. Ukukhangisa kwesikrini se-LED kuyisiphathi esikhulu semidiya yokukhangisa yangaphandle ngekhulu lama-21, futhi kubuye kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhangisa. Umphumela walokhu uqinisa kakhulu ukwesekwa kokukhangisa ngaphandle kokwakhiwa kwesithombe sasemadolobheni.
Njengomkhiqizi wokukhombisa amandla we-LED, iRoyal Display izoqhubeka nokukhiqiza izikrini zokubonisa zombala ezigcwele zokonga amandla nezemvelo.